ပြ2018နာရှိသော hypersexual အပြုအမူရှိသူတစ် ဦး ချင်းအကြားရှိမီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုများနှင့်အနားယူမှုအခြေအနေဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲခြင်း (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူ (2018) နဲ့တဦးချင်းစီတို့တွင်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု
comments: ဤသည် ဦး နှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမှဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် လိင်စွဲလမ်းသူများနှင့်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအပေါ်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများစာရင်း။ ဤ fMRI လေ့လာမှုသည်လိင်စွဲသူများအား (“ ပြaticနာရှိသော hypersexual အပြုအမူ”) ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ လိင်စွဲသူများသည်ယာယီအစွန်အဖျားများ၌မီးခိုးရောင်ကိစ္စများလျော့နည်းသွားသည်။
အဆိုပါ VBM ရလဒ်များကိုခုနှစ်တွင်လျှော့ချယာယီ gyrus အသံအတိုးအကျယ်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်, လက်ဝဲ STG အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အဆိုး PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ဖယ်ရှားရေးခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ပြသခဲ့ပြီး (Baird et al ။ , 2002) ။ လိင်စိတ်နိုးထအပေါ် Task ကို-based ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုလည်း (Redouté et al (2000) ။ ; Stoleru et al, 1999 ။ ) Deactivate ယာယီဒေသများနှင့်လိင်စိတ်နိုးထဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများယာယီဒေသများလိင်စိတ်နိုးထ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လုပ်သူများတားစီးနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုနှင့်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ဒီတားစီး၏လျှော့ချရေး (သိသိသာသာ hypersexuality မှ Baird et al ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, 2002; ။ Redouté et al ။ (2000); ။ Stoleru et al, 1999) ။ ကျနော်တို့ယာယီ gyrus အတွက်လျှော့ချမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းအတွက်တိုးမြှင့်လိင်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်
လေ့လာမှုကဘယ်ဘက်အထက်ယာယီ gyrus (STG) နှင့်လက်ျာ caudate အကြားပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အလုပ်လုပ်မှုဆက်သွယ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Kuhn & Gallnat, 2014 သည်အလားတူတွေ့ရှိချက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် -ဘယ်ဘက် dorsolateral prefrontal cortex ခွင့် caudate ၏ functional ဆက်သွယ်မှုအဆိုးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနာရီနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်“ ဒီလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်
ကျန်းမာဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုသိသိသာသာ STG နှင့် caudate နျူကလိယအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုကိုလည်း PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဤဒေသများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ခန္ဓာဗေဒ, အ STG ဟာ caudate နျူကလိယ (Yeterian နှင့် Pandya, 1998) နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယဟာ striatum ၏အဓိကမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းဖြစ်ပြီး, ဆုလာဘ်-based အပြုအမူသင်ယူမှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, အဘက်ဘက်မှအထောက်အကူအပျော်အပါးနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း, စွဲလမ်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှဆက်စပ်
လိင်စွဲလည်းယာယီ cortex functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျှော့ချ precuneus ပြ။ အဆိုပါစက္ကူကရှင်းပြသည်:
အများအပြားကလေ့လာမှုများဘယ်ဘက် precuneus ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံပုံစံများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာအာရုံစိုက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုရှိသည်ဟု (Cavanna နှင့် Trimble, 2006; ကားရှိမုနျ et al, 2002 ။ ) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စွဲအပေါ်လေ့လာမှုများစွဲနှင့်အတူသင်တန်းသားများကို ပို. အာရုံရွှေ့လာခဲ့သည်နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်သတင်းပို့, ဤအမူအကျင့်လက္ခဏာမှာ precuneus ၏ပြောင်းလဲ activation နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းပါပြီ (ဒေါင် et al, 2014; ။ Courtney et al, 2014 ။ ) ။ ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲအာရုံစိုက်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့မူမမှန်နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအဖြစ် precuneus ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို, PHB အတွက် precuneus ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအခန်းကဏ္ဍများအတွက်အထောက်အထားများကို
အဆိုပါစာရေးဆရာပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု၏နှစ်ခုဖြစ်ရပ်များ၏အရေးပါမှုကိုရှင်းပြပါ:
(။ Voon et al, 2015 Seok နှင့် Sohn, 2014) ညာဘက် caudate နျူကလိယနှင့် STG အကြားအနိမ့်ဆက်သွယ်မှု PHB ထိုသို့သောဆုလာဘ်ပေးပို့နှင့်မျှော်လင့်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့လိုငွေပြမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ယာယီ gyrus နှင့်ယာယီ gyrus နှင့်တိကျသောဒေသများအကြားပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာယင်း precuneus နှင့် caudate) အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏လုပ်သူများတားစီးအတွက်နှောင့်အယှက်မှအထောက်အကူဖြစ်စေအကြောင်းတည်း။ အကြံပြု ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်များယာယီ gyrus အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲမှုများ PHBspecific features တွေဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ PHB ၏ရောဂါအတှကျအ biomarker ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများအတွက်အစောပိုင်းလေ့လာမှုတွေက cortex နဲ့ဆုလာဘ်စနစ်အကြားပိုမိုဆင်းရဲတဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ cortex ၏အလုပ်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဆုလာဘ်တည်ဆောက်မှုများမှဖြစ်ပေါ်လာသောတွန်းအားများကိုဘရိတ်ချရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလိုငွေပြမှုသည်ဆေးစွဲမှုအားလုံး၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုအကျဉ်းချုပ် -
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ပစ္စုပ္ပန် VBM နှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလေ့လာမှုမီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတို့တွင်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည်။ ပို. အရေးကြီးသည်, အမှိန်ဖျော့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအဆိုး PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PHB ၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများသို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသညျ။
လက်ျာ cerebellar ဂလင်းတမျိုးနှင့်လက်ဝဲ STG နှင့်အတူလက်ဝဲ cerebellar ဂလင်းတမျိုး၏တိုးမြှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စပျတိုးကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာဤဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှု PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းထားမခံခဲ့ရပါဘူး။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသည့် cortex နှင့် cerebellum အကြားဆက်သွယ်မှုများကိုပြောင်းလဲလျှင်စာရေးသူအံ့ဩ:
ဤသည်သည်ဤဆက်သွယ်မှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲခြင်းသို့မဟုတ် hypersexuality ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်ဖွယ်ရှိသည်ကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။
ဦးနှောက် Res ။ 2018 ဖေဖော်ဝါရီ5။ pii: S0006-8993 (18) 30055-6 ။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2018.01.035 ။
hypersexual ရောဂါ၏လက္ခဏာများပေါ် Neuroimaging လေ့လာမှုများစုဆောင်းခဲ့ကြသေးပြဿနာ hypersexual အပြုအမူ (PHB) နဲ့တဦးချင်းစီအတွက်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာသာမကြာသေးမီကလေ့လာခဲ့ပြီ။ voxel-based morphometry နှင့်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီး PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်မူမမှန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒီလေ့လာမှုက။ PHB နှင့် 19 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတဆယ်ခုနစ်တစ်ဦးချင်းစီကဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့။ မီးခိုးရောင်ဦးနှောက်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု 3T သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်သုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလက်ဝဲသာလွန်ယာယီ gyrus (STG) တွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာသိသိသာသာလျှော့ချခြင်းနှင့်ညာဘက်အလယ်ယာယီ gyrus ရှိခဲ့ပါတယ်။ PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းလက်ဝဲ STG နှင့်လက်ဝဲ precuneus အကြားနှင့်လက်ဝဲ STG နဲ့ညာဘက် caudate အကြားငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်လျော့နည်းလျက်ရှိသည်။ လက်ျာ caudate နှင့်အတူလက်ဝဲ STG နှင့်၎င်း၏ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှစ်ဦးစလုံး PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူသိသာထင်ရှားသောနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်လက်ဝဲ STG အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုနှင့်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ချို့ယွင်း PHB ဆက်စပ်နှင့် PHB ၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများသို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
KEYWORDS: Caudate နျူကလိယ; functional ဆက်သွယ်မှု; ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူ; သာလွန်ယာယီ gyrus; Voxel-based morphometry
Doi: 10.1016 / j.brainres.2018.01.035
အဆိုပါ VBM ရလဒ်များကိုခုနှစ်တွင်လျှော့ချယာယီ gyrus အသံအတိုးအကျယ်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်, လက်ဝဲ STG အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အဆိုး PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ဖယ်ရှားရေးခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ပြသခဲ့ပြီး (Baird et al ။ , 2002) ။ လိင်စိတ်နိုးထအပေါ် Task ကို-based ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုလည်း (Redouté et al (2000) ။ ; Stoleru et al, 1999 ။ ) Deactivate ယာယီဒေသများနှင့်လိင်စိတ်နိုးထဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများယာယီဒေသများလိင်စိတ်နိုးထ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လုပ်သူများတားစီးနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုနှင့်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ဒီတားစီး၏လျှော့ချရေး (သိသိသာသာ hypersexuality မှ Baird et al ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, 2002; ။ Redouté et al ။ (2000); ။ Stoleru et al, 1999) ။ ကျနော်တို့ယာယီ gyrus အတွက်လျှော့ချမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းအတွက်တိုးမြှင့်လိင်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, ဤတွေ့ရှိချက်လက်ဝဲ STG PHB နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆားကစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြံပြုအံ့သောငှါခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်။ နောက်ထပ်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ဆားကစ်ပေါ်မှာလက်ဝဲ STG ၏လျော့ချ volume ၏သက်ရောက်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့, အနားယူ-ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအ precuneus ယင်းထက်သာလွန်ယာယီ sulcus နှင့်အတူအပြန်အလှန် cortical ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ် left precuneus-လက်ဝဲ STG နဲ့ညာဘက် caudate-လက်ဝဲ STG ဆက်သွယ်မှုလျှော့ချပြီဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဤဒေသများသည် occipital အမြင်အာရုံဧရိယာနှင့်အတူ, အ temporo-parieto-occipital cortex ပါဝင် (Leichnetz, 2001; Cavanna နှင့် Trimble, 2006) ။ အများအပြားကလေ့လာမှုများဘယ်ဘက် precuneus ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံပုံစံများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာအာရုံစိုက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုရှိသည်ဟု (Cavanna နှင့် Trimble, 2006; ကားရှိမုနျ et al, 2002 ။ ) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စွဲအပေါ်လေ့လာမှုများစွဲနှင့်အတူသင်တန်းသားများကို ပို. အာရုံရွှေ့လာခဲ့သည်နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်သတင်းပို့, ဤအမူအကျင့်လက္ခဏာမှာ precuneus ၏ပြောင်းလဲ activation နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းပါပြီ (ဒေါင် et al, 2014; ။ Courtney et al, 2014 ။ ) ။ ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲအာရုံစိုက်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့မူမမှန်နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအဖြစ် precuneus ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို, PHB အတွက် precuneus ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအခန်းကဏ္ဍများအတွက်အထောက်အထားများကို
ကျန်းမာဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုသိသိသာသာ STG နှင့် caudate နျူကလိယအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုကိုလည်း PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဤဒေသများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ခန္ဓာဗေဒ, အ STG ဟာ caudate နျူကလိယ (Yeterian နှင့် Pandya, 1998) နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယဟာ striatum ၏အဓိကမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းဖြစ်ပြီး, rewardbased အမူအကျင့်သင်ယူမှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, အဘက်ဘက်မှအထောက်အကူအပျော်အပါးနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း, စွဲလမ်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှဆက်စပ်
အပြုအမူတွေကို (မာရင်းကျို et al, 2012; ။ Vanderschuren နှင့် Everitt, 2005) ။ မျောက်များအတွက် striatum အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုများ (Apicella et al ။ , 1991, 1992) ပို့ဆောင်မှုနှင့်မျှော်လင့်ဆုချတုံ့ပြန်ရန်ပြသခဲ့ကြသည်။ Striatal အာရုံခံမက်လုံးပေး salience, ဆုလာဘ်ပြင်းအားနှင့်ဆုလာဘ် preference ကို coding ခြင်းဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုကွပ်မျက်မီနှင့်စဉ်အတွင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ကိုယ်စားပြုမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး (ဟက်စ et al ။ , 2001) ။ ။ အမူအကျင့်စွဲလူဦးရေအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ connection များနှင့်တာဝန်-based အသွေးသည်အောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) လှုပ်ရှားမှု (ဟောင်ကောင် et al တစ်လျှော့ချရေးလျော့နည်းသွားကဲ့သို့သော, striatal ပွောငျးလဲ၏တသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ, 2013a, ခ၏ Neuroimaging လေ့လာမှုများ; Jacobsen et အယ်လ်, 2001; ။ ။ လင်း et al, 2012; Seok နှင့် Sohn, 2015) ။ မကြာသေးမီကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းစားသုံးမှုအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှု striatum မြားတှငျပွောငျးလဲအကျိုးကိုစနစ် (Kühnနှင့် Gallinat, 2014) ၏တစ်ဦးပြင်းထန်သောဆွ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အာရုံကြော plasticity ပြောင်းလဲမှုများရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ (။ Voon et al, 2015 Seok နှင့် Sohn, 2014) ညာဘက် caudate နျူကလိယနှင့် STG အကြားအနိမ့်ဆက်သွယ်မှု PHB ထိုသို့သောဆုလာဘ်ပေးပို့နှင့်မျှော်လင့်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့လိုငွေပြမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ယာယီ gyrus နှင့်ယာယီ gyrus နှင့်တိကျသောဒေသများအကြားပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာယင်း precuneus နှင့် caudate) အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏လုပ်သူများတားစီးအတွက်နှောင့်အယှက်မှအထောက်အကူဖြစ်စေအကြောင်းတည်း။ အကြံပြု ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်များယာယီ gyrus အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲမှုများ PHBspecific features တွေဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ PHB ၏ရောဂါအတှကျအ biomarker ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လက်ျာ cerebellar ဂလင်းတမျိုးနှင့်လက်ဝဲ STG နှင့်အတူလက်ဝဲ cerebellar ဂလင်းတမျိုး၏တိုးမြှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စပျတိုးကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာဤဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှု PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းထားမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒီဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲသို့မဟုတ် hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ cerebellar ဂလင်းတမျိုးအထူးသဖြင့် corticostriatal အာရုံခံဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူ၎င်း၏ပေါင်းစည်းမှုအတွက် obsessive-compulsive မမှန်အတွက်အလွန်အမင်းပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ် (Middleton နှင့် Strick, 2000; ။ Brooks et al, 2016) ။ obsessive-compulsive မမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများ (Peng က et al, 2012 ။ Rotge et al, 2010 ။ ) ကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုမိုကြီးမား cerebellar volumes ကိုပြသခဲ့သည်။ လိင် (Fong သည်, 2006) ထုတ်ဆောင်ရွက်ရန်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive နှင့် compulsive အဖြစ် obsessive-compulsive ရောဂါ, တူကြောင်းလက်တွေ့ features တွေနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန် PHB နှင့်အတူအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီ။ သို့အတွက်ကြောင့် cerebellum အတွက်တိုးမြှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ယာယီ gyrus နှင့်ယာယီ gyrus နှင့်တိကျသောဒေသများအကြားပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာယင်း precuneus နှင့် caudate) အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏လုပ်သူများတားစီးအတွက်နှောင့်အယှက်မှအထောက်အကူဖြစ်စေအကြောင်းတည်း။ အကြံပြု ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်များယာယီ gyrus အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲမှုများ PHB တိကျတဲ့ features တွေဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ PHB ၏ရောဂါအတှကျအ biomarker ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
PHB VBM နှင့် RS-fMRI ပေါင်းစပ်အသုံးချဖို့နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအပေါ်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများရှိခဲ့သည်။ ယခင်အစီရင်ခံစာများတိုးမြှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ကြပြီ, ဤတွေ့ရှိချက်များအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အခြေခံ neurobiology elucidated ကြပါပြီ (Schmidt က et al ။ , 2017) ။ သို့သျောထိုလေ့လာမှု PHB နှင့်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲတချို့အကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်အမူအကျင့်လက္ခဏာများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖယ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ (။ Schmidt က et al 2017) PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲတချို့ဖော်ထုတ်ရန်ယခင်လေ့လာမှုပုံတူကူးယူခြင်း, နောက်ထပ် hypersexuality နှင့်လိင်စွဲအချက်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှင်းလင်းဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်ထိန်းချုပ်ထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
PHB ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်သတ်မှတ်ထား PHB အဖြေရှာတဲ့စံကို အသုံးပြု. လက်တွေ့အင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်ဦးကိုအရည်အချင်းပြည့် Clinician နေဖြင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ (Carnes et al, 2010; ။ Kafka, 2010) (စားပွဲတင် S1) ။ ကိုး age-, education-, အ PHB အဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံရန်မပြုခဲ့တဲ့သူကျား, မ-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာမှုအတွက်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ PHB နှင့်ထိန်းချုပ်မှုသင်တန်းသားများကိုများအတွက်အောက်ပါဖယ်စံအသုံးပြုသော: 35 ကျော်သို့မဟုတ် 18 အောက်မှာအသက်; ထိုကဲ့သို့သောလက်ရှိဆေးဝါး, လေးနက်ခေါင်းကိုဒဏ်ရာတစ်ခုသမိုင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတ္တုရှိခြင်းယေဘုယျ MRI contraindications (ဆိုလိုသည်မှာ, ပြင်းထန် astigmatism, ကို အသုံးပြု. အရက်သို့မဟုတ်လောင်းကစားစွဲ, ယခင်သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါလက်ရှိ, အာရုံကြောနှင့်ဆေးဝါးမမှန်, လိင်တူဆက်ဆံခြင်း, ကဲ့သို့သောအခြားစှဲ သို့မဟုတ် claustrophobia) ။